Desktop SuperGIS, fampitahana sasany ... - Geofumadas
March, 2013 jeospatial - GIS, GvSIG, SuperGIS
SuperGIS dia ampahany amin'ny modely SuperGeo izay noresahiko andro vitsivitsy lasa izay, miaraka amin'ny fahombiazana tsara any amin'ny kaontinanta Azia. Aorian'ny fitsapana azy dia ireto misy ny fiatraikany izay noraisiko.
Amin'ny ankapobeny dia izay ataon'ny programa mpifaninana hafa rehetra no atao. Amin'ny Windows ihany no azo ampandehanana azy, mety mivoatra amin'ny C ++ izany, ka mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha tena tsara izy; na dia mitondra ny fatiantoka amin'ny tsy maha-multiplatform aza izany ... olana iray izay vitsy ihany no voavaha teny an-dalana.
Raha jerena ny bika aman'endrika dia mitovy amin'ny ArcGIS an'ny ESRI izy io, miaraka amina frame mitsingevana sy azo fehezina, fananganana vondrona, fisintomana ary fidinana. Ankoatr'izay, ny lojika amin'ny fananganana sy ny fanitsiana dia marihina tokoa mba hifaninana amin'ity modely ity; inona no azo jerena amin'ny fiparitany lehibe:
Spatial Analyst, Network, Topology, Stadystical Space, 3D, Biodiversity Analyst.
Ho fanampin'izay, izy io dia miaraka amin'ireo rindranasa tafiditra ao amin'ny kinova desktop: SuperGIS Data Manager, mitovy amin'ny ArcCatalog sy SuperGIS Converter, mitovy amin'ny ArcToolbox.
Ny lojika ny tetikasa fanorenana no nentin-drazana XML raki-daza amin'ny fanitarana .sgd manompo toy ny .mxd / .apr amin'ny ArcGIS na .gvp gvSIG. Tsy misy fanitarana ny manafatra ny tetikasa avy amin'ny iray hafa, ary raha mbola GIS fandaharana lojika io no itarihany ny fomba hamaky ny boky IMS tetikasa, izany ihany koa ny tahirin-kevitra ao anatin'ny manokana manohana Geodatabase (MDB), MS SQL Server, Oracle maka sary sy PostgreSQL Server.
Ny format .sgd dia manana fiovana lehibe roa; Ny iray amin'izao ny version 3.1a dia mampiditra ny iray teo aloha amin'ny version 3.0.
Ao amin'ny format vector:
DWG, hatramin'ny version 2013
Ny zavatra rehetra dia toa mahazatra amin'ny fitaovana hafa rehetra, na dia eto aza dia maneho fa ny format vector format dwg, dgn, dxf dia manaiky ny dikan-teny vao haingana.
Tsy fantatro ny fomba hahatratraran'izy ireo izany, saingy iray amin'ireo fahalemen'ny Manifold GIS, gvSIG ary rindrambaiko open source hafa. Raha misy rakitra iray / dwg, dia mamela azy ireo hamerina azy io, mamono azy, mamadika azy, na dia amin'ny sosona (haavo) fotsiny aza izy io, na dia referansa fotsiny aza no entina azy; raha te hanitsy azy dia tsy maintsy ataonao any ivelany ny format .geo na .shp. Mahaliana ny manazava fa ny endrika .geo dia tsy manohana afa-tsy polygon, polyline ary point; multipoint dia tohanan'ny .shp fotsiny rehefa mamorona sosona vaovao.
Vakio ny Microstation dgn ao amin'ny kinova 8 ary AutoCAD dwg amin'ny kinova 2013… mendrika homena trosa izy ity. Na dia manana tombony aza ny gvSIG afaka manova dwg, dxf ary kml, raha SuperGIS ihany no afaka manitsy ny shp sy ny endrika extension extension .geo azy manokana. Ny endrika vector propriitary hafa dia ny .slr (Supergeo Layer File), ahafahanao miasa amin'ny takelaka mampiasa SuperSurv, ary koa avy amin'ny mpanjifa amin'ny birao.
Avy amin'ny SuperGIS Data Converter dia afaka manao fifanakalozan-kevitra eo amin'ny format taloha, anisan'izany ny format kml (Google Earth), e00 (ArcInfo), sef (Standard Exchange Format).
SGR, izay format manan-tompo amin'ny SuperGIS
Ny format .sgr dia manana Supergeo; Izany dia mihazakazaka amin'ny haavony mahavariana na ny fitsaboana sy ny fitsaboana manokana amin'ny Image Analyst.
Izy io dia manana fatiantoka tsy mamaky ny rakitra ENVI, SPOT izay tohanan'ny programa toa ny Manifold GIS sy gvSIG. Ny fahaizan'ny georeferan-tsary dia fahita amin'ny zavatra ataon'ny gvSIG / ArcGIS.
Avy amin'ny SuperGIS Data Converter dia afaka mamadika eo anelanelan'ny endrika img, gis, lan (Erdas), tif, ecw, sid, jpg, bmp, ary ny ASCII txt.
Ao amin'ny fenitra OGC
WMS (fanompoana amin'ny sari-tranonkala)
WFS (fanompoana fanompoana amin'ny Internet)
WCS (serivisy fandrakofana tranonkala)
WMTS. Ity ny format manan-tompo mozika (Tiles)
Ity sy ny endri-javatra hafa dia tsy tonga amin'ny rindrambaiko maimaim-poana, ampiana izy ireo ho fanampim-panazavana: OGC Client, GPS, Geodatabase Client, SuperGIS Server Desktop Client ary Image Server Desktop Client.
Ny tranga misy ny endrika kmz dia tohanana amin'ny fanitarana 3D Analyst ihany. Raha ny endrik'ireo tamba-jotra dia tohanan'ny .geo izy ireo, afaka manafatra mampiasa DataConverter avy amin'ny rakitra endrika, ary koa data tahiry nomerika azo ampidirina avy amin'ny rakitra endrika sy sgr.
Nahasarika ny saiko hatrany io lafiny io, izay amin'ny ankapobeny manery antsika hampiasa programa CAD hananganana angona sy programa GIS rehefa efa miasa izy ireo. Fandrosoana lehibe izany gvSIG ary ny Quantum GIS amin'ity lafiny ity, ao anatin'izany ny fonosana fanampiny amin'ny raharaha OpenCAD tools izay tsy tokony hitarainantsika intsony.
Raha ny SuperGIS dia mamela ny fanovana ny sosona iray na maromaro, amin'ny fomba nentim-paharazana. Ireo izay manana extension .geo sy .shp dia aseho, azonao atao ny manangona sy mampiato ny fanontana. Ankoatr'izay, ao amin'ilay kiheba iray ihany dia misy fampiasana fanovana mahazatra, izay ampiarahina amin'ny palety gvSIG:
Andeha hojerentsika ny fampitahana ireo fitaovana CAD izay manana AutoCAD, gvSIG ary SuperGIS, raha jerena ny lisitra efa tranaiko indrindra amin'ny baiko AutoCAD.
No. didy AutoCAD gvSIG SuperGIS
4 Mivoaka Amin'ny Karoka
7 Karakarao tsara
8 dika mitovy
9 To move
10 To rotate
13 Hanova verindroa
14 To blow
22 teboka maro
Ny voalohany 14 (1 hatramin'ny 14) dia teo amin'ny lisitra misy ahy 25 ny ankamaroan'ny baiko ampiasainaNy sasany amin'izy ireo dia tsy mitovy amin'ny mitovy, toy ny: - join / make block
-autopolygon / sisintanyHere, manaitra fa ny SuperGIS ao anaty vondrona andiany tokana mihoatra ny iray, izay mipoitra amin'ny fomba mifanentana, toy ny raharaha «Sketch» ​​izay ahitana tsipika, polyline, teboka ary multipoint.
Ny baiko hanovana ny vondrona geometries dia mametaka, mamelatra, manalasala.
Tsy misy baiko nampiasainay tamin'ny CAD, toy ny Array, polygon mahazatra, ellipse. Amin'ny fampiharana dia tsy maika loatra izy ireo, na dia nampidirin'ny gvSIG ho anisan'ny fanaovana izay zava-dehibe amin'ny CAD aza izy ireo.
Manitatra ary miavaka ny kopian'ny Parallel. Ary koa ny baiko mifindra izay mamela ny hiditra amin'ny fandrindrana toerana haleha.
Toa azo ampiharina ny fiasa, toa tonga tamin'io i SuperGIS tamin'ny asa azo ampiharina amin'ny mpampiasa tena izy. Raha misy ny marim-pototra, dia misy safidy hafainganam-pandeha ho an'ny teboka afovoany, fihaonan-dàlana ary teboka akaiky indrindra. Na dia azo alamina ihany koa aza raha ampiharina amin'ny sisiny na tendrony misy fandeferana manokana sy isaky ny sosona.
Miaraka amin'ny baiko, apetraka ny varavarankely mitsangana; Izy io dia azo namboarina avy amin'ny mpandrindra, ny elanelan-trano / ny loha, ny halavirana / ny halavany ... na dia tao amin'ny sasany hitako dia somary hafahafa ny fiasa ... mitaky fampiharana ho fitaovana vaovao.
Ankoatra izany, ireo didy izay takiana amin'ny fizotry ny GIS dia miavaka, izay tsy dia mahaliana loatra ny CAD, toy ny:
Fizarana (fisarahana), Fizarana amin'ny vertex, Generalize, malama (malama), mahazatra be amin'ny asan'ny GIS. Ho fanampin'ny fizotran'ny geoprocessing mahazatra izay saika Kopia / apetaka izay efa fantatsika.
Amin'ny ambaratongam-drafitra ho an'ny fanontana, hiresaka izany amin'ny lahatsoratra manaraka aho; Satria manana ny famandrihako aho ary hiandry eo am-panaovana ny fampandrosoana marobe izay iasan'izy ireo, izay nanolorako ny fahafaha-mitahiry ireo fanjakana misy azy ireo, mba hahafahako mamoaka dataframe samihafa amin'ny endriny iray ihany. Nampanantenaina aho fa hanana izany ho an'ny SuperGIS Desktop 3.1b amin'ny Q2013 XNUMX; mitovy amin'ny ataon'ny CadCorp na Manifold GIS.
Ho famaranana, toa fitaovana mafonja amin'ny biraon'ny GIS.
Ho an'ireo te hanandrana izany,
Azonao atao ny maka ny SuperGIS Desktop
Previous Post«Previous Amin'ny valopy tsy teknolojia
Next Post Gazety 3 sy traikefa 5 amin'ny sehatry ny jeografikamanaraka »
Valiny iray amin'ny "Desktop SuperGIS, fampitahana sasany ..."
Rosario hoy izy:
Misaotra ny fampahalalana.